Fandraisana an-kaonty momba ny kaonty amin'ny Internet
FAMPISEHOANA FAMPISEHOANA | EUROPE ASIA AFRIKA AMERIKA OCEANIA
Ny sampana kaonty FIDU sampanaLINK ary ny serivisy tsy avelao velively ianao, avelao hiaraka aminao fa ahafahanao mijanona ao anatin'ny rindran-kaonty sy ny kaonty voatokana anao amin'ny alàlan'ny toerana ahafahanao ny TOKO FISAKO.
Ny ivon-kaontinao FIDULINK eo am-pelatananao ny zavatra ilainao rehetra sy ny fandraisana hafa ary ny famoahana ny faktioranao, ny fandraisanao ny teny nalahatrao, ny fiverenan'ny faktiora, ny fanambarana ara-tsosialy, ny fanambaràn-ketra, ny famandrihana kaonty, ... Ny biraon'ny sampana orinasa vahiny dia ao amin'ny smartphone na solosainao izao.
NY INDRINDRA 100 INDRINDRA INDRINDRA INDRINDRA ANAO
FIVORIANA MANOMPOANA NY FIVORIANA MANOMPO
FIDULINK manome anao serivisy ho an'ny orinasa mety hampiasa ny serivisy fitantanana kaontin'ny orinasa vahiny anao; manana ny vahaolana amin'ny kaonty marobe ianao (avy amin'ilay orinasa iray ihany).
Ankehitriny mamorona toerana ahafahan'ny mpanjifa amin'ny fametrahana ny kaonty sampana orinasa vahiny.